चीन OEM स्वचालित भौं पेन्सिल चिकनी खनिज प्राकृतिक देख ब्रश कारखाना र निर्माताओं को साथ3रंग ब्रो पेन्सिल | जिनफुया
OEM स्वचालित भौहें पेन्सिल चिकनी खनिज प्राकृतिक देख ब्रशको साथ color रंग ब्रो पेन्सिल
हामीलाई भौं पेन्सिल किन चाहिन्छ?
भौहें आँखा माथि छोटो कपालको क्षेत्र हो जुन केही स्तनपायी जन्तुहरूको ब्राउजको तल्लो मार्जिनको आकार अनुसरण गर्दछ। तिनीहरूको मुख्य कार्य पसीना, पानी, र अन्य मलबेलाई आँखा सकेटमा तल झर्नुबाट रोक्नको लागि हो, तर तिनीहरू मानव संचार र अनुहारको अभिव्यक्तिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो भौंलाई रौं हटाउने र मेकअपको माध्यमद्वारा परिमार्जन गर्न सामान्य छ।
तपाईंलाई एक पेन्सिल चाहिन्छ यदि तपाईं आफ्नो भौहें चमकदार बनाउन चाहनुहुन्छ भने, कपाल बीचको खाली ठाउँ भर्नुहोस् वा तिनीहरूको आकार सच्याउनुहोस्। छायाले भौंलाई भोल्युम दिन्छ। तर शरारती कपाललाई वशमा राख्न तपाईंले थप जेल प्रयोग गर्नु पर्छ। यदि तपाईंको भौहिको प्राकृतिक रूपले उत्तम आकार छ भने, केवल पेन्सिल वा आँखा छाया प्रयोग गर्नुहोस्।
बस्तु संख्या 4030-1
रंग खैरो, कालो, मध्यम खैरो
सुहाउदो सबै छाला प्रकार, तपाईको भौं पेन्सिल शेड कुन छनौट गर्नुपर्दछ भनेर निर्णय गर्न कृपया आफ्नो कपालको र match मिलाउनुहोस्।
नेट सामग्री १ ग्राम
समारोह भौं ब्यूटी मेकअप
हामी वचन दिन्छौं शाकाहारी र १००% क्रुयल्टी-नि: शुल्क
वाटरप्रूफ - फेड गर्न सजिलो छैन, वाटरप्रूफ, पसिना-प्रुफ, लामो समयको लागि स्मज-प्रुफ।
लागू गर्न सजिलो - अद्वितीय चार फोर्क टिप टाउको, भौंको समोच्च कोर्नुहोस् र भौंवर-आकृतिको साथ भित्र समान रूपमा र color गर्न जारी राख्नुहोस् तपाईंले विचित्र र प्रकृति भौहिको सिर्जनाको लागि अन्तिम चरण कोर्नुहुन्छ।
SMUDGE- प्रमाण - एक चिकनी र धनी स्टीरियो भावना भौं को चित्रण गर्न को लागी सजिलो, smudge- प्रुफ, आफ्नो भौहें दिनभर आकार हेर्दै रहनुहोस्। सुविधाजनक र छिटो मेकअप हटाउन।
उपयोग - पूर्ण रूपमा परिभाषित ब्राउजहरूको लागि प्राकृतिक, भरिएका आईब्रोको दृश्य सिर्जना गर्न खाली ठाउँ भरेर तपाईंको भौं विस्तार गर्नुहोस्।
चिरस्थायी - लामो-चिरस्थायी सूत्रले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईको श्रृंगार पसीना, वर्षा र पानीको खेलहरु मार्फत मादक वा लुप्त बिना सम्पूर्ण दिन रहन्छ।
हाम्रो स्वचालित भौं पेन्सिल ब्रशको साथ विकसित गरिएको थियो तपाईंलाई निर्दोष र प्राकृतिक देखिने भौौं सिर्जना गर्न मद्दत गर्न।
हाम्रो विशेष गरी डिजाइन गरिएको त्रिकोणात्मक रिफिल डिजाइन तपाईको ब्राउजमा सजीलो रेखाहरु रेखाचित्र बनाउन मद्दत गर्दछ, यो बनावट केक बिना सहज छ, स्वाभाविक रूपमा सँगै एक सुन्दर भौं गठन गर्न को लागी कुनै पनि श्रृंगार को लागी आफ्नो अनुहार फ्रेम गर्दछ।
तपाईका भौहें फुलर, अधिक पालिश र परिभाषित देखिन्छन्।
यो लागू गर्न एकदम सजिलो छ, यो एक साथ सुरु गर्ने र पेशेवरहरूको लागि उत्तम बनाउने। भौं पेन समान रूपमा राम्रो रंग प्रदान गर्दछ कि दिन भर रहन्छ।
# कुनै smudging / # कुनै फेडिंग / # लागू गर्न सजिलो / # हटाउन को लागी सजिलो
# वाटरप्रूफ / # लामो दिगो / # प्राकृतिक हेराई
स्वत: कसरी प्रयोग गर्ने भौं पेन्सिल एक परिपूर्ण भौं आकार ड्राफ्ट गर्न?
हाम्रो भौं पेन्सिल वाटरप्रूफ र पसिना प्रमाण हो, तर यो हल्का छ जुन तपाईं सजिलैसँग यसलाई मेकअप रिमूभर प्याड वा मेकअप रिमूभर पानीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: थोक सिल्की लिक्विड फाउन्डेशन colors रंग रight्गीन ml० मि.मि. प्राकृतिक क्रीमयुक्त बनावट र मोइस्चराइजिंग फार्मूलाको साथ
अर्को: भौहें बृद्धि निजी लेबल प्राकृतिक घटक ब्राउज वृद्धि पोषण तरल सीरम
स्वचालित भौं पेन्सिल